XIINXALA GABAABAA HAALA AMMA KEESSA JIRRUUFI FUULADURAA!
Hunduma keenya biratti akkuma beekamu yeroo ammaa kana quuqamtoonni Oromoo yeroo dhumaaf garbummaa seenaa gochuuf hojiirra jira!. Addumatti galata addaa kan uummata Oromoo qabsa’aa jiraniifirraa qaban keessaa:
a. Barattoota/Qeerroofi qarree Oromoo harka duwwaa diina jilbeenfachiisaa jiran,
b. WBO (alaaf keessaa)…Poolisoota dhiigaan Oromoo ta’an (warra dammaqan qofa),
c. Miidiyaalee Oromoo (OMN, Simbirtuu, SBO, Raadiyoo hafuura biyyaafi kkf…)
d. Aartistoota Oromoo (Weellistoota dhiiraafi dubara dhugaaf sabaaf quuqaman qofa….)
e. Miseensota OPDO (Warra dhugumaan Oromoof quuqaman..odeeffannoo diinaa saaxilun kutannoon Tigiree dura dhaabbachaa jiran qofa..)
f. Hayyoota /quuqamtoota Oromoo (Oromo activists)…Warreen nuffii tokko malee sagalee saba Oromoo dhaabbilee addunyaa gurguddoo biraan gahaa jiran hundumaa…
g. Oromoota Miidiyaalee hawaasaa Marsariitii (website), Twitter, FB, email, skype. Fi kkf hirmaannaa guddaa taasisuun waa’ee Oromoo daangaa addunyaa hundumaan geessisa jiraniif,
h. Dhaabbilee amantaa garaagaraa yaadaan, kadhannaa gochuun, dhibee Oromoo addunyaatti himaa jiraniifi gama hedduun qabsaa’aa jiraniif (Hundaa ta’uu baatanilee…)
i. Oromoota biyya diyaaspoora keessa jiran maallaqa isaaniin, beekumsa isaaniin, hiriira ba’uudhaan, sagalee Oromoo addunyaan ga’uufi kkf citanii tokko ta’anii hojjetaa jiran hundumaafi kkf …
Akkuma beekamu Oromoon gamtaadhaafi tokkummaan FDG/FXG gaggeessaara. Kunis qabsoon ummattin keenyaa gaggeessa jiru gara gulantaa haaraatti ceesiseera. Amantaan, lagaan, ilaalchaa siyaasaaf dhimmoota gara garan walqooduu dhiissuun madda cimina qabsoo kana ta’uun isaa iraanfatamuu hin qabu. Dabalataanis gumaachii odeefannoo walidabarsuu, gara OMNfi Facebookn gaggeefamaarulle meeshaa qabsoo keenyaa cimaadha. Gama keennaan kana haa jennu malee diinni keenyas rafee bulaa hin jiru. Halkaniifi guyyaa nuratti hojjachaara.
Hinshakkiinaa! Haqa qabna, hundaa qabna, nimormanna, ni injifanna!!